Websiteyo ku ah cadaw Somaliland iyo Madaxweynaha cusub
Tuesday January 09, 2018 - 11:27:01 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Waxaa jira Websites sheegta in ay ka mid yihiin website yada Somaliland laakiin u adeega cadawga Somaliland . ilaa intii la doortay madaxweynaha cusub Mujahid Muse Biixi Cabdi
Waxaa jira Websites sheegta in ay ka mid yihiin website yada Somaliland laakiin u adeega cadawga Somaliland . ilaa intii la doortay madaxweynaha cusub Mujahid Muse Biixi Cabdi waxay isticmaalaan title aanu hadda lahayn madaxweyuhu oo ah Kornayl Muse biixi baa waxaa soo magacaabay ama sameeyey . Marka ay magaciisa raacinayaan Kornayl waxay u jeedaan in ay hoos u dhigaan sharaftiisa oo waxay u quudhi la yihiin in any yidhaahdaan Madaxweynaha Somaliland Muse biixi Cabdi . Madaxweynuhu wuxuu kornayl ahaa 40 sano ka hor maanta maaha kornayl ee madaxweyne si dimuqaraadi ah dadka Somaliland u soo doorteen weeye ee ha xisdiyin ee title kiisa saxda ah sheeg oo dheh Madaxweyne Muse biixi Cabdi . Madaxweyne Muse Biixi Cabdi wuxuu darajada kornayl qaatay isaga oo aan 30 jir gaadhin taasina waa darajo aad u sareysa isaga oo dadaas ah in uu qaato Masayrka waxa layidhaa waa balaayo oo waxay u quudhi la yihiin in ay siiyaan magaciisa saxda ah oo ah Madaxweyn Muse Biixi Cabdi .Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu wadankan u soo halgamayey 40 sanadood waxaanu rajaynayaa in uu xukunka sii hayo 10 ka sanadood ee soo socda haddii ilaahay yidhaa . Waxaa layidhaahdaa xashaa nin libin kaa xisdiyey xumihi waa yaabe .Website yadan waxaan filayaa in la wada garanayo oo halkan ka sheegi maayo laakiin waxaan ku talin lahaa in loo aqoonsado in ay cadaw yihiin lagana mabnuuco wadanka in laga akhristo cidii u shaqeysana loo sheego in aanay isticmaali Karin darajo aanu hadda madaxweynuhu lahayn.
Aad baad u salaaman tihiin dhamaan bahda Burco online website